အိုက်စလန်ရှိ မီးတောင်များ- ထူးခြားချက်များနှင့် ပေါက်ကွဲမှုများ | ကွန်ရက် မိုးလေဝသ
ဂျာမန် Portillo | 07/01/2022 11:28 | ဘူမိဗေဒ
အိုက်စလန်၊ ရေခဲနှင့်မီးပြည်သည် သဘာဝပရဒိသုဖြစ်သည်။ ရေခဲမြစ်များ၏ အအေးဓာတ်နှင့် အာတိတ် ရာသီဥတုတို့သည် ကမ္ဘာမြေကြီး၏ ပေါက်ကွဲအပူရှိန်နှင့် တိုက်ဆိုင်နေသည်။ ရလဒ်မှာ ပြင်းထန်လှသောရှုခင်း၏ တုနှိုင်းမရတဲ့ အလှတရားအတွက် အံ့မခန်းခြားနားမှုများရှိသော ကမ္ဘာတစ်ခုဖြစ်သည်။ အိုက်စလန် မီးတောင်မရှိရင် ဒါတွေအားလုံးက မဖြစ်နိုင်ဘူး။ တန်ခိုး၊ အိုက်စလန်ရှိ မီးတောင်များ ဤမြေ၏သဘာဝကို အခြားမီးတောင်များထက် ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုနိုင်ပြီး အဆုံးမရှိသော ချော်ရည်များဖုံးလွှမ်းနေသော ချော်ရည်များဖုံးလွှမ်းနေသော သဲနက်လွင်ပြင်များ၊ ကြမ်းတမ်းသောတောင်ထွတ်များနှင့် ကြီးမားသော မီးတောင်ပေါက်များကို ဖန်တီးပေးနိုင်သည်။
ထို့ကြောင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် အိုက်စလန်ရှိ မီးတောင်များအကြောင်း သိလိုသမျှနှင့် ၎င်းတို့၏ လက္ခဏာများနှင့် အရေးပါမှုတို့ကို ပြောပြရန် ဤဆောင်းပါးကို ရည်ညွှန်းပါမည်။
1 အိုက်စလန်ရှိ မီးတောင်များ
3 မီးတောင်ပေါက်ကွဲမှု အကြိမ်ရေ
4 အိုက်စလန်တွင် မီးတောင်အန္တရာယ်
မျက်နှာပြင်အောက်ရှိ မီးတောင်များသည် နိုင်ငံ၏အကျော်ကြားဆုံး အံ့ဖွယ်အချို့ကိုလည်း ဖန်တီးခဲ့သည်။ သဘာဝရေပူစမ်းများနှင့် ပေါက်ကွဲနေသော ရေပူစမ်းများ. ထို့အပြင် ယခင်က မီးတောင်ပေါက်ကွဲမှုများ၏ သက်ရောက်မှုများကို မြွေလိမ်မြွေကောက် ချော်ရည်ဂူများနှင့် ဆဋ္ဌဂံပုံ ဘေ့ဆော့တိုင်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည့် ချောက်ကမ်းပါးများတွင် တွေ့မြင်နိုင်သည်။
လူထောင်ပေါင်းများစွာသည် ၎င်း၏မီးတောင်များနှင့် ၎င်းတို့ဖန်တီးထားသည့် အံ့ဖွယ်အမှုများကို ကြည့်ရှုရန် အိုက်စလန်သို့ စုပြုံရောက်ရှိခဲ့ကြသည်။ မီးတောင်ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်နေစဉ်တွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် အခွင့်အလမ်းအတွက် ပိုမိုစိတ်ထက်သန်သင့်သည်။ ကမ္ဘာပေါ်ရှိ အံ့မခန်းအခမ်းနားဆုံးနှင့် အံ့ဖွယ်ဖြစ်ရပ်များထဲမှ တစ်ခုကို ကြည့်ရှုလိုက်ပါ။ အိုက်စလန်၏ သဘောသဘာဝနှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းသဘောသဘာဝနှင့် နိုင်ငံ၏သဘောသဘာဝအတွက် အရေးကြီးသည်ဟု ယူဆပါက၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် အိုက်စလန်မီးတောင်များအတွက် ဤတရားဝင်လမ်းညွှန်ချက်ကို ပြုစုထားပြီး၊ သင်မေးနိုင်သော မေးခွန်းအားလုံးကို ဖြေဆိုနိုင်မည်ဟု မျှော်လင့်ပါသည်။ ဤမီးတောင်များ၏ စွမ်းအား။
အိုက်စလန်တွင် အသက်ဝင်နေသော မီးတောင်နှင့် အမြုံမီးတောင်ပေါင်း ၁၃၀ ခန့်ရှိသည်။ ကျွန်းအောက်တွင် အသက်ဝင်နေသော မီးတောင်စနစ် 30 ခန့်ရှိသည်။အနောက် Fjords မှလွဲ၍ နိုင်ငံတစ်ဝှမ်း၊
West Fjords တွင် မီးတောင်လှုပ်ရှားမှုမရှိတော့ရခြင်း အကြောင်းရင်းမှာ ၎င်းသည် အိုက်စလန်ပြည်မကြီး၏ ရှေးအကျဆုံးအပိုင်းဖြစ်ပြီး၊ လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း 16 သန်းခန့်က စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး အလယ်အလတ်အတ္တလန်တိတ်အကွာအဝေးမှ ပျောက်ကွယ်သွားခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် အနောက် Fjords သည် ဘူမိအပူရေအစား ရေကို အပူပေးရန်အတွက် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား လိုအပ်သော နိုင်ငံ၏ တစ်ခုတည်းသော ဧရိယာဖြစ်သည်။
အိုက်စလန်ရှိ မီးတောင် လှုပ်ရှားမှုသည် မြောက်အမေရိကနှင့် ယူရေးရှား တိပ်တိုနစ်ပြားများကို ပိုင်းခြားထားသည့် အတ္တလန်တိတ် အလယ်ခေါင်တွင် နိုင်ငံ၏ တည်နေရာကြောင့် ဖြစ်သည်။ Iceland သည် ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက်တွင် ဤတောင်ကြောကိုမြင်နိုင်သည့် ကမ္ဘာပေါ်ရှိ နေရာအနည်းငယ်ထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤ tectonic plates များသည် ကွဲပြားသည်၊ ဆိုလိုတာက တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ကွဲကွာနေတယ်။ ထိုသို့ပြုလုပ်ရာတွင် အင်္ကျီအတွင်းမှ magma သည် ဖန်တီးနေသည့်နေရာကို ပြည့်စေပြီး မီးတောင်ပေါက်ကွဲသည့်ပုံစံဖြင့် ပေါ်လာမည်ဖြစ်သည်။ ဤဖြစ်စဉ်သည် တောင်များတစ်လျှောက်တွင် ဖြစ်ပေါ်ပြီး Azores သို့မဟုတ် Santa Elena ကဲ့သို့သော အခြားမီးတောင်ကျွန်းများတွင် တွေ့ရှိနိုင်သည်။
Mid-Atlantic Range သည် Iceland တစ်ခုလုံးကိုဖြတ်၍ လည်ပတ်နေသည်၊ တကယ်တော့ ကျွန်းအများစုသည် အမေရိကန်တိုက်ကြီးတွင် ရှိသည်။ Reykjanes ကျွန်းဆွယ် နှင့် Mývatn ဒေသ အပါအဝင် တောင်ကြောများ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း မြင်နိုင်သော ဤနိုင်ငံ တွင် နေရာများစွာ ရှိပြီး အကောင်းဆုံးမှာ Thingvellir ဖြစ်သည်။ အဲဒီမှာ ပန်းကန်ပြားတွေကြားက ချိုင့်တွေကိုဖြတ်ပြီး အမျိုးသားဥယျာဉ်ရဲ့တစ်ဖက်တစ်ချက်မှာရှိတဲ့ တိုက်ကြီးနှစ်ခုရဲ့ နံရံတွေကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်ရတယ်။ ပန်းကန်ပြားများကြား ကွဲလွဲမှုကြောင့် ဤချိုင့်သည် တစ်နှစ်လျှင် 2,5 စင်တီမီတာခန့် ကျယ်သည်။
အိုက်စလန်တွင် မီးတောင်ပေါက်ကွဲမှုများသည် ခန့်မှန်းရခက်သော်လည်း ၎င်းတို့သည် ပုံမှန်ဖြစ်သည်။ ပေါက်ကွဲခြင်းမရှိဘဲ XNUMX အစောပိုင်းကတည်းက ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုမျှမရှိခဲ့ပါ။ ၎င်းတို့သည် လျင်မြန်စွာ သို့မဟုတ် ပိုမိုကျယ်ပြန့်စွာ ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည့် ဖြစ်နိုင်ခြေသည် အလွန်ပင်ပမ်းနေသော်လည်း၊
အိုက်စလန်တွင် နောက်ဆုံးသိရသည့် ပေါက်ကွဲမှုသည် 2014 ခုနှစ်တွင် ကုန်းမြင့်ရှိ Holuhraun တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ Grímsfjall သည် 2011 ခုနှစ်တွင် အတိုချုံး ပေါက်ကွဲခဲ့ကြောင်း မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ပြီး ပိုကျော်ကြားသော Eyjafjallajökull မီးတောင်သည် 2010 ခုနှစ်တွင် ဆိုးရွားသော ပြဿနာများ ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ 'လူသိများသည်' ဟူသော အသုံးအနှုန်းကို အသုံးပြုရခြင်းမှာ အကြောင်းရင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။ 2017 ခုနှစ်တွင် Katla နှင့် 2011 ခုနှစ်တွင် Hamelin အပါအဝင် နိုင်ငံအနှံ့အပြားတွင် ရေခဲလွှာမကွဲသေးသော မီးတောင်ပေါက်ကွဲမှုများ အများအပြားဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သံသယဖြစ်ဖွယ်ရှိသည်။
လက်ရှိတွင် အိုက်စလန်တွင် မီးတောင်ပေါက်ကွဲမှုအတွင်း လူသားများ၏ အသက်အန္တရာယ်ကို ခြိမ်းခြောက်မှုမှာ အလွန်သေးငယ်သည်။. နိုင်ငံတဝှမ်းတွင် ပြန့်ကျဲနေသော ငလျင်စခန်းများသည် ကြိုတင်ခန့်မှန်းရန် အလွန်ကောင်းမွန်ပါသည်။ Katla သို့မဟုတ် Askja ကဲ့သို့သော အဓိက မီးတောင်များ တုန်လှုပ်နေသည့် လက္ခဏာများ ပေါ်လာပါက၊ ဧရိယာသို့ ဝင်ရောက်ခွင့်ကို ကန့်သတ်ထားမည်ဖြစ်ပြီး အဆိုပါ ဧရိယာအား အနီးကပ် စောင့်ကြည့်မည်ဖြစ်သည်။
ပထမဆုံး အခြေချနေထိုင်သူများ၏ ကောင်းသောသြတ္တပ္ပစိတ်ကြောင့်၊ အတက်ကြွဆုံး မီးတောင်သည် လူနေထိုင်ရာ နူကလိယနှင့် ဝေးသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ Katla နှင့် Eyjafjallajökull ကဲ့သို့သော မီးတောင်များသည် မြောက်ဘက်တွင် တည်ရှိသောကြောင့် အိုက်စလန်၏ တောင်ပိုင်းကမ်းရိုးတန်းတွင် မြို့အနည်းငယ်ရှိသည်။ ဤတောင်ထွတ်များသည် ရေခဲမြစ်အောက်တွင် တည်ရှိသောကြောင့်၊ ယင်းမီးတောင်ပေါက်ကွဲမှုကြောင့် သမုဒ္ဒရာသို့သွားရာလမ်းတစ်လျှောက်ရှိ အရာအားလုံးကို ဖယ်ရှားပစ်နိုင်သည့် ကြီးမားသောရေခဲရေလျှံမှုများ ဖြစ်စေသည်။
ဒါက တောင်အများစုကို အနက်ရောင်သဲကန္တာရလို ဖြစ်စေပါတယ်။ တကယ်တော့၊ ၎င်းသည် ရေခဲပြင်အနည်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသော လွင်ပြင်တစ်ခုဖြစ်သည်။
၎င်းတို့၏ မှန်းဆမရခြင်းကြောင့်၊ အိုက်စလန်တွင် jökulhlaups သို့မဟုတ် စပိန်ဘာသာဖြင့် လူသိများသော အဆိုပါ ရေခဲရေလွှမ်းမိုးများသည် အိုက်စလန် မီးတောင်လှုပ်ရှားမှု၏ အန္တရာယ်အရှိဆုံး အသွင်အပြင်တစ်ခုအဖြစ် ကျန်ရှိနေပါသည်။ အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း ရေခဲအောက်ရှိ မီးတောင်ပေါက်ကွဲမှုများကို အမြဲတမ်းမတွေ့နိုင်သောကြောင့် အဆိုပါလျှပ်တစ်ပြက်ရေကြီးမှုများသည် သတိပေးချက်မရှိဘဲ ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်။
ဟုတ်ပါတယ်၊ သိပ္ပံပညာက အဆက်မပြတ်တိုးတက်နေပြီး၊ မိုးသီးကြွေကျနိုင်သည်ဟု သံသယအနည်းငယ်ရှိသရွေ့ ဘေးလွတ်ရာသို့ ထွက်ခွာနိုင်ပြီး စောင့်ကြည့်နိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ထင်ရှားသော အကြောင်းပြချက်များဖြင့် တားမြစ်ထားသော လမ်းများပေါ်တွင် နွေရာသီ သို့မဟုတ် အန္တရာယ်မရှိဟု ထင်ရသည့်အခါ၌ပင် မောင်းနှင်ခြင်းကို တားမြစ်ထားသည်။
မီးတောင်အများစုသည် လူနေထူထပ်သောနေရာများနှင့် ဝေးကွာသော်လည်း မတော်တဆမှုများသည် အမြဲတမ်းဖြစ်ပွားလေ့ရှိသည်။ သို့သော်လည်း အဆိုပါကိစ္စများတွင် Iceland ၏ အရေးပေါ်အစီအမံများသည် Vestman ကျွန်းများရှိ Heimaey တွင် 1973 တွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သောမီးတောင်ပေါက်ကွဲမှုတွင်တွေ့မြင်ခဲ့သည့်အတိုင်းအလွန်ထိရောက်ကြောင်းသက်သေပြခဲ့သည်။
Hemai သည် မီးတောင်ကျွန်းစုဖြစ်သည့် Vestman ကျွန်းစုတွင် နေထိုင်သည့် တစ်ခုတည်းသောကျွန်းဖြစ်သည်။ မီးတောင်ပေါက်ကွဲချိန်မှာ လူပေါင်း ၅၂၀၀ လောက် နေထိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဇန်န၀ါရီ ၂၂ ရက်အစောပိုင်းတွင် မြို့ပြင်တွင် ပပ်ကြားအက်များ စတင်ဖြစ်ပေါ်ပြီး မြို့လယ်ခေါင်တွင် ဖောက်ထွင်းဝင်ရောက်ကာ လမ်းများပျက်စီးကာ ရာနှင့်ချီသော ချော်ရည်များ လောင်ကျွမ်းသွားခဲ့သည်။
ညနှောင်းပိုင်းနဲ့ ဆောင်းရာသီမှာ ဖြစ်ခဲ့ပေမယ့်၊ ကျွန်းကို ဘေးလွတ်ရာသို့ လျင်မြန်ထိရောက်စွာ ရွှေ့ပြောင်းနိုင်ခဲ့သည်။ ဒေသခံများ ဘေးကင်းစွာ ဆင်းသက်ပြီးသည်နှင့် အပျက်အစီး နည်းပါးစေရန် ကယ်ဆယ်ရေး အဖွဲ့များသည် နိုင်ငံအတွင်း တပ်စွဲထားသော အမေရိကန် တပ်ဖွဲ့များနှင့် ပူးပေါင်း လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။
ပင်လယ်ရေကို ချော်ရည်များအတွင်းသို့ အဆက်မပြတ်စုပ်ထုတ်ခြင်းဖြင့် ၎င်းတို့သည် အိမ်များစွာမှ ဝေးရာသို့ လမ်းကြောင်းပြောင်းနိုင်ရုံသာမက ကျွန်း၏စီးပွားရေးကို ထာဝရအဆုံးသတ်ကာ ဆိပ်ကမ်းကိုပိတ်ဆို့ခြင်းမှလည်း တားဆီးနိုင်ခဲ့သည်။
ဤအချက်အလက်ဖြင့် အိုက်စလန်ရှိ မီးတောင်များနှင့် ၎င်းတို့၏ ဝိသေသလက္ခဏာများအကြောင်း ပိုမိုလေ့လာနိုင်မည်ဟု မျှော်လင့်ပါသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ကွန်ယက်မိုးလေဝသ » ဘူမိဗေဒ » အိုက်စလန်ရှိ မီးတောင်များ